နည်းပညာ – Page 30 – Mawlamyine Daily
Online ပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ဝင်ငွေရှာနိုင်တာလဲ
ရွှေမြိုင်သူ၊ရွှေမြိုင်သားတွေ Online ပေါ်မှာ ငွေဘယ်လိုရှာကြမလဲ၊ ၁၇နှစ်အရွယ် Temper ကတော့ Online Marketing ကနေ တစ်လကို ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၃သောင်းရနေတဲ့ အကြောင်း Mawlamyine Daily စာဖတ်သူတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Online ပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ဝင်ငွေရှာနိုင်တာလဲ ============================= မော်လမြိုင်၊၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ဆက်ကျော်သက်လူငယ်အများစုဟာ Video Game ကို စွဲစွဲမက်မက် ဆော့လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို Video Game တွေ ဆော့ဖို့ လိုတဲ့ ငွေကြေးကိုတော့ သူတို့တွေ က နည်းလမ်း၂မျိုးနဲ့ ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ မိဘတွေဆီကနေ လက်ဖြန့်တောင်းတာပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတာပါ။ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုတော့ သူတို့ စားချင်တာစားကြမယ်။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို Video Game …
Continue reading "Online ပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ဝင်ငွေရှာနိုင်တာလဲ"
မော်လမြိုင်၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ မော်လမြိုင် မနက် မြင်ကွင်းများ။
မော်လမြိုင်၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ ဟန်းဖုန်းက လူကို ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူ တော်တော်များများ သိရှိပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဓိက ထိခိုက်စေတာက ဦးနှောက် ဖြစ်ပြီး ဖုန်းက ထုတ်လွတ်တဲ့ ရေဒီယို လိုင်း ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း radiation ကြောင့်ပဲ ဖုန်းကို သထိထား သုံးဖို့ မှာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဆေးပညာရှင်နဲ့ Scientist များက အတူတူလေ့လာပြီး Spe cific Absorption Rate (SAR) သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- တစ်ယူနစ်ကို ရေဒီယိုလိုင်း ဘယ်လောက်ထိ ထုတ်လွတ်ပြီး လူဦးနှောက်ထဲကို ဘယ်လောက် ဆုတ်ယူ (adsorb) လုပ်စေ တာမျိုးကို …
Continue reading "မော်လမြိုင်၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ မော်လမြိုင် မနက် မြင်ကွင်းများ။"
မော်လမြိုင်၊ ၂၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ လူအများစုက Laptop Computer တွေကို ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုဖို.လို. ယုံကြည်ထားကြပေမယ်. ကုမ္မဏီကြီးတွေ ဖြစ်တဲ. Apple, Hewlett Packard and Dell စတဲ့ ကုမ္မဏီတွေကတော့ Laptopကို ပေါင်ပေါ်မတင်ဖို. သတိပေးခဲ.ကြတယ်။ Laptop ကို ကြာရှည်စွာ ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုခြင်းကြောင်. ရှားပါးတဲ. Toasted Skin ရောဂါလက္ခဏာစုကို ရစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ၁၂နှစ်သားအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ၅၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ် အပူထုတ်လွတ်တဲ. လက်တော.ကို လအတန်ကြာ. ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ဂိမ်းကစားခဲ.ရာမှ Toasted Skin Syndrome ရရှိခဲ.ကြောင်း Pediatrics Medical Journal မှာဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၄င်းရောဂါဟာ လက်တော.ပ် ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုတဲ.အခါ …
Continue reading "Laptop အသုံးပြူသူများ သတိထားရန်"
စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုံး တာဝါတိုင်နဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ရောင်ခြည်
မော်လမြိုင်။ ၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၆ သဘာဝအလျှောက် ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာ ကြီးထဲမှာ မျက်စိနဲ့ ကောင်းကောင်း မြင်နိုင်တဲ့ လှိုင်းတွေ ရှိသလို မမြင်ရတဲ့ လှိုင်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီလှိုင်းတွေကို လှိုင်းအလျားပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးအစား ခွဲထားတာပါ။ ဂါမာရောင်ခြည်တို့၊ X- ray ရောင်ခြည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ UV ray တို့လို အလျားတိုတဲ့ လှိုင်းတွေက စွမ်းအင်မြင့်မားကြပြီး အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လှိုင်းနဲ့ ရေဒီယို လှိုင်းတို့လို လှိုင်းအလျားရှည်သွားရင်တော့ စွမ်းအင်က ပိုလျော့သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လူတွေရဲ့ မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ ရောင်စဉ်တွေ ပါတဲ့ အလင်းရောင်ကတော့ အလယ်အလတ် လှိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောင်ခြည်တွေမှာ …
Continue reading "စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုံး တာဝါတိုင်နဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ရောင်ခြည်"
မော်လမြိုင်၊၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ ပေါချောင်ကောင်းဆိုတာက ခဏလေးသုံးပြီး ကြာကြာမခံလို့ လွှင့်ပစ်လိုက်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒေါ်လာ ၅၀အောက်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် အသုံးအဆောင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ တကယ်အသုံးဝင်တာလေးတွေ ရနိုင်လာပါပြီ။ နားကြပ်ကလေးတွေကနေ ကြိုးမဲ့စပီကာလေးတွေအထိ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတဲ့ ကိရိယာလေးတွေအထိ ဒေါ်လာ ၅၀အောက်နဲ့ ရနုိုင်တာလေးတွေရှိလာပါပြီ။ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်နော်။ ၁။ Misfit Flash Misfit Flash ဆိုတာကတော့ ရေစိုခံတဲ့ ကျန်းမာရေးလက်ပတ်လေးပါ။ Misfit Flash ရဲ့ဘက်ထရီဟာ တခါအားသွင်းထားရင် ၆ လထိ ခံပါတယ်။ ဒီ Misfit Flash ကို iOS နဲ့ရော Android နဲ့ရော အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီကိရိယာလေးက သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်ပြည့်မပြည့်နဲ့ ခြေလှမ်းအရေအတွက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ပေးထားမှာပါ။ ဒီ Misfit …
Continue reading "ဒေါ်လာ၅၀ အောက်ပေါချောင်ကောင်းလေးတွေ"